Joe Biden ayaa ku dhow inuu ku guuleysto xafiiska Aqalka Cad inkastoo ay socoto weli tirintu… – Hagaag.com
Joe Biden ayaa ku dhow inuu ku guuleysto xafiiska Aqalka Cad inkastoo ay socoto weli tirintu…
Posted on 5 Nofeembar 2020 by Admin in World // 0 Comments
Joe Biden oo ah musharaxa Xisbiga dimuqraadiga ayaa aamisan in uu guuleystay inkastoo wali guud ahaan marka la eego dalka Mareykanka ay socto tirinta codadka la dhiibtay.
Musharaxa Dimoqraadiga wuxuu ku dhow yahay tiradii loo baahnaa oo aheyd 270 codadka Electoral Vote-ka, wuxuu hadeer marayaa 264 halka Trump uu joogo 214, weli waxaa la tirinayaa gobolada Georigia, Arizona, Pennsylvania, Nevada.
Dhinaca tartanka Senate-ka waxaa lakala marayaa 47-47 la arki doonee cida hesha 51 xubin, laakin waxaa loo badinayaa in Jamhuurigu uu aqlabiyada Senate-ka sii heysan doono.
Dimuqraadiga ayaa sheegay in doorashadan ay ka heleen codadkii ugu badnaa abid oo musharax Madaxweyne Mareykanka uu ku guuleysto.
Dhanka kale, kooxda ololaha Trump ayaa doonayaa in la joojiyo tirinta codadka qeybo kamid ah gobolada Georgia iyo Pennsylvania halkaas oo kamid ah gobollada la isku hayo, lamana saadalin kara cidda ku guuleysan karto codadka goboladan.
Dacwadda ay gudbiyeen kooxda ololaha doorashada Trumpa ayaa waxaa ay ku sheegeen in mid ka mid ah kormeerayaashooda uu arkay mid ka mid ah shaqaalaha doorashada oo xilli dambe 53 cod ku daraya codadkii horey u gaaray deegaanka Chatham.